I-Eve Degree, isikhululo sezulu esincinci seKhayaKit | IPhone iindaba
U-Eve Degree, isikhululo sezulu esincinci seKhayaKit
ULuis Padilla | | HomeKit, Ezahlukeneyo
Sihlalutya i-Eve Degree, isixhobo esincinci esihambelana neKhayaKit oya kuhlala unolwazi ngayo ubushushu, ukufuma kunye noxinzelelo emoyeni.
1 Uyilo kunye neenkcukacha
2 Ukuhambelana kweKhayaKit
Uyilo kunye neenkcukacha
Isidanga esincinci se-Eve sifana kakhulu nezinye izixhobo zoluhlobo, ezinje nge-Eve Button okanye i-Eve Room. Ubume bayo besikwere obunamacala ajikeleziweyo, isakhelo sealuminiyam esidityanisiweyo kunye nebhedi esikhumbuza ngokungathandabuzekiyo i-iPhone 5, kwaye umphambili omnyama ocwebezelayo uyilo esele luphawu lwendlu. Kukhanya kakhulu (i-43 gram), kunye Ukuqinisekiswa kwe-IPX3 kuyivumela ukuba ibekwe ngaphandle. Umzekelo, unokufakwa kwifestile, nokuba uphumle kwisiseko okanye ukuxhoma, enkosi kumngxuma ongasemva.
Ngaphambili sifumana isikrini se-monochrome LCD esoloko sikhona, sikubonisa ulwazi olukhethileyo ngeqhosha langemva: ubushushu kwi-ºC, ubushushu kwi-ºF kunye nokufuma okuphakathi. Akukho luhlobo lolawulo lokuchukumisa kwiscreen, njengoko kunjalo kwiGumbi le-Eve, isixhobo esilinganayo kodwa sisetyenziselwa ngaphakathi.
Emuva singasifumana isithuba sebhetri yeqhosha (CR2450) enokutshintsha ngokulula. Ngokomvelisi, ubomi bebhetri bunyaka omnyeNdiyabulela kwinto yokuba unxibelelwano olusetyenzisiweyo yiBluetooth 4.0, esisinika ukuzimela kodwa sithintela umgama esinokuwubeka kuwo ngokubhekisele kwi-Apple TV okanye i-HomePod (i-10 yeemitha ubuninzi). Sikwafumana iqhosha lomsebenzi elikhankanyiweyo kunye nomngxunya omncinci wokuyixhoma.
Umvelisi uEva wagqiba kwakudala ukuba Sebenzisa iKhayaKit njengeqonga elikhethekileyo lezincedisi zakho, kwaye esi siDanga se-Eva asikho ngaphandle. Ukongeza esi sixhobo kwinethiwekhi yethu kusinika ulwazi malunga neqondo lobushushu, ukufuma kunye noxinzelelo lomoya kwi-iPhone yethu, nangona eyokugqibela ivela kwisicelo sikaEva kuphela (unxibelelwano), njengoko iCasa ingaluxhasi olu lwazi. Kwisicelo sikaEva sinokubona iirafu ezinembali yeparamitha nganye.
Ewe singasebenzisa uSiri ukwazi nangaliphi na ixesha nayiphi na iparameter elinganisiweyo, okanye ukufikelela kuyo kwisicelo seKhaya se-iPhone, i-iPad, iMac okanye iApple Watch. Kodwa sinokumisela izinto ezizenzekelayo, ezinomdla ngokwenene kwisicelo sikaEvaKwakhona, iCasa ityhila imida yayo emininzi. Ke sinokumisela umthetho owenza ukuba isixhobo sakho sokunkcenkceshela singasebenzi xa iimeko ezithile zobushushu kunye nokufuma kufezekiswa.
Ukuba ungomnye wabo bafuna ukwazi iqondo lobushushu lokwenyani ngaphandle kwendlu kwaye ungahlali naloo nto ikunika nasiphi na isicelo semozulu kwi-iPhone yakho, esi siGaba se-Eve yile nto uyifunayo. Uyilo lwayo, umgangatho wezinto ezigqityiweyo kunye nokugqitywa zilungile kakhulu, kwaye ukusebenza kwayo, njengesiqhelo kwisixhobo sikaEva, kungaphezulu kunokuthenjwa. Ungayithenga kwiAmazon nge- € 67 (unxibelelwano)
Incinci kwaye ilula
Imida kwi-app yasekhaya
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » HomeKit » U-Eve Degree, isikhululo sezulu esincinci seKhayaKit
Inxalenye yokuqala ye-iPhone 12 Pro Max iqinisekisa ibhetri enomthamo ophantsi kune-iPhone 11 Pro Max